1.Maxaan u dooranaynaa sheyga shirkaddaada?
YUFA waxaa la dhisay 1987, in ka badan 30 sano oo waayo aragnimo ah. Waxaan ku hogaamineynaa awoodaha R&D ee suuqa, shan xarumood oo R&D ah iyo seddex saldhig oo wax soo saar ah, 17 si buuxda otomaatig ah u xakameynaya dijitaalka foornooyinka, 2 foornada wareega, 1 godka tunelka iyo 1 taangiga saxanka riixa, oo leh awood wax soo saar oo ah 250,000 tan.
YUFA runti waa soo saare, ma aha oo kaliya inay ku siiso alaabada tayada sare leh qiimaha ugu fiican, laakiin sidoo kale waxay bixin kartaa adeegga iibka ka hor iyo kan ka dambeeya midka ugu fiican.
3. Alaab noocee ah ayaad bixin kartaa?
Waxyaabahayaga ugu muhiimsan waxaa ka mid ah alumina isku dhafan oo cufnaan badan, alumina alumina ah oo soodhiyam ah oo hooseeya, alumina isku dhafan oo cufan, hal keliyuuto koronto ah, alumina-magnesia spinel, α-alumina, alumina granulation powder, alumina ceramics iyo in ka badan 300 nooc oo sideed taxane ah.
Oo waxaan ku siinnaa alaabooyin taxane alumina ah oo tayo sare leh macaamiisha ugu sareysa dhinacyo badan, sida maaddada loo yaqaan 'abrasives', qalabka heerkulka sarreeya, dhoobada alumina, waxyaabaha ka hortagga daxalka, muraayadda LED-ka, buuxiyo korontada, shiidi iyo nadiifinta, iyo qalabka kuleylka kuleylka ku shaqeeya
4.Can shirkadaadu ma bixin kartaa shaybaar ama waxaan ku booqan karnaa warshadaada?
Dabcan, waxaan bixinnaa shaybaarro bilaash ah, waana lagusoo dhaweynayaa inaad soo booqato warshaddeena waqti kasta.
5. Mudo intee leeg ayay tahay waqtiga dhalmadaadu?
Guud ahaan waa 3-5 maalmood haddii alaabtu taallay. ama waa 15-20 maalmood haddii alaabtu aysan oollin, waa hadba tirada.
6. Waa maxay muddada dhalmadaadu?
EXW, FOB Tianjin ama macaamiisha kale 'codsigooda